သတင်း – Page 193 – Burmese Online News
Because this article is merely about how to begin writing great English compositions, let’s now dive straight into that. On paperacomposition or an essay, it’s vital to comprehend your investigators will not merely go over your articles but in addition look at important issues like your grammar, punctuation, in addition to your style of composing. Before starting, there...
YPS ကတ်စနစ်တွင် ယာဉ်စီးခအားလုံးကိုတန်းတူသတ်မှတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့မှ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး ဦးလှအောင်က ပြောသည်။ ရန်ကုန်မြို့၊ ကျိုက္ကဆံလမ်းပေါ်ရှိ YRTA ရုံးချုပ်တွင် အောက်တိုဘာလ ၂ ရက်က ကျင်းပသည့် အပတ်စဉ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် အထက်ပါအတိုင်း ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။“ယာဉ်စီးခပိုထည့်ရတဲ့ယာဉ်လိုင်းတွေရှိတယ်ဆိုပြီး တိုင်ကြားလာတာတွေရှိတယ်။ အထူးသဖြင့် ၃၇ ယာဉ်လိုင်းက ၁၀၀၀ အထိပေးရတယ်ဆိုပြီး တိုင်ကြားတာတွေရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ၃၇ ယာဉ်လိုင်းသည် ထောက်ကြန့်ကနေထွက်တဲ့ကားရှိသလို ဥက္ကံကနေထွက်တဲ့ကားတွေရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်အစ/အဆုံးကို ၃၀၀ ထည့်ရတယ်။ တချို့ခရီးသည်တွေက ပတ်စီးကြတယ်။ ပတ်စီးကြတော့ ဟိုကဂိတ်စကနေထွက်တဲ့ ယာဉ်စီးခကို ထည့်ခိုင်းတယ်။ မပေးချင်ရင်မြို့တွင်းပတ်တဲ့ကားတွေရှိတယ်။ အဲဒီကားတွေစီးလို့ရပါတယ်။ အဲဒါမှမဟုတ်ဘဲ ပိုတောင်းရင်တော့ နံပါတ်နဲ့တကွ တိုင်ကြားလို့ရပါတယ်။ ဒီလိုကိစ္စတွေမဖြစ်အောင် YPS ကတ်စနစ်မှာ ယာဉ်စီးခ အားလုံးတန်းတူသတ်မှတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့မှ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး ဦးလှအောင်က ပြောသည်။ အဆိုပါ YPS ကတ်စနစ်ကို ပထမအဆင့်အနေဖြင့် မြို့တွင်းယာဉ်လိုင်းများဖြစ်သည့်...
ကိုယ်ပိုင်ဂရန်မြေ အမည်ပေါက်မြေပေါ်တွင် ကနဦးပေးသွင်းငွေ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် မိမိကြိုက်နှစ်သက်သည့်ဒီဇိုင်းများကို Myanmar Art Construction & Development က ဆောက်လုပ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါကုမ္ပဏီထံမှ သိရသည်။ အဆိုပါကိုယ်ပိုင်အိမ်များကို အနိမ့်ဆုံးတစ်လလျှင် ကျပ်တစ်သိန်းခွဲ ပေးသွင်းရုံဖြင့် တည်ဆောက်နိုင်သည့်အိမ်များအပြင် ဘဏ်နှင့် တည်ဆောက်သူ၏ ဝင်ငွေခွင့်ပြုချက်အရ တန်ဖိုးမြင့်အိမ်များကိုလည်း ဆောက်လုပ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါကုမ္ပဏီထံမှ သိရသည်။ “မြန်မာပြည်မှာ အခြေခံလူတန်းစား တတ်နိုင်အောင် လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်လကို တစ်သိန်းခွဲလောက်သွင်းပြီး အိမ်ဆောက်လို့ရအောင် လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ မြေပိုင်ရှိတယ်၊ အဆောက်အအုံ ဆောက်ချင်တယ်ဆို ကုန်ကျစရိတ်ရဲ့ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ပေးသွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု Myanmar Art Construction & Development ကုမ္ပဏီမှ မန်နေဂျင်း ဒါရိုက်တာ ဦးကျော်စွာဟိန်းက ပြောဆိုသည်။ ကိုယ်ပိုင်မြေပေါ်တွင် ပိုင်ဆိုင်မှု အခိုင်အမာရှိသူများအနေနှင့် အိမ်ရာဆောက်လုပ်ခွင့်ချေးငွေကို KBZ ဘဏ်တွင် လျှောက်ထားနိုင်ပြီး Myanmar...
အောက်တိုဘာလ (၃) ရက်နေ့ တွင် တောင်ငူမြို့ရှိ ပသိဟိုတယ်တွင် ဓားပြတိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။ ပသိဟိုတယ်ရှိ မှန်များကို ရိုက်ခွဲခဲ့ရာ ပျက်ဆီးမှုအချို့ဖြစ်ပေးခဲ့ပြီး ငွေတောင်းရမ်းမှုများလည်း ရှိခဲ့သည်ဟုသိရသည်။ ပသိဟိုတယ်ရှေ့ရှိ အများအသုံးပြုရန် ထားရှိထားသော CB Bank မှ ငွေထုတ်စက်များနှင့် ဆိုင်ကယ်များကိုလည်း ရိုက်ခွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ ပသိဟိုတယ်သည် တောင်ငူမြို့၊ (၂) ရပ်ကွက်၊ အနောက်ကျုံးပတ်လမ်းတွင် ရှိသော ဟိုတယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Photos-Rosie Cho Too